သက်ဝေ: ဖိနပ်လေး တစ်ရံ
ဆုမြတ်မိုး August 20, 2013 at 5:50 PM
ဆုမြတ်ကိုကျလူထွားလို့ ဖိနပ်ဝယ်ရင် အမြဲတမ်းဆိုဒ်ကြီးပေးတယ်..။ အမှန်က သုံးဆယ့်လေး ၊ သုံးဆယ့်ငါးလောက်ပဲစီးတာ... :D tips လေးတွေမှတ်သွားပါတယ်နော် ။
ဟန်ကြည် August 20, 2013 at 5:58 PM
အင်း ဖိနပ်တွေအကြောင်းကတော့ ရေးချင်စရာ အတော်ကောင်းတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပဲ...လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဖိနပ်တွေအကြောင်း...ဖိနပ်တွေသာစကားပြောတတ်ရင် ဘာတွေပြောပြကြမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမိပါရဲ့...
kay August 20, 2013 at 6:08 PM
ကိုယ့်ခြေထောက်ကလေး ဖွက်ထားမှ... ဖိနပ်ကလည်း အစုတ်ကလေးဆိုတော့..( အားငယ်ပြီး ပြန်သွားတယ်..)း(
Sonata Cantata August 20, 2013 at 6:59 PM
ခြေထောက်လေးက လှလိုက်တာ ပြောစရာ မရှိဘူး
ညီလင်းသစ် August 20, 2013 at 7:10 PM
မြန်မာပြည်မှာ လူစီးတဲ့ ဖိနပ်တွေနဲ့ မတော်လို့ ‘နတ်သမီး’ ဖြစ်နေရာကနေ စင်္ကာပူရောက်မှ လူအဖြစ်ကို ပြန်ရတဲ့အကြောင်း တွေးမိပြီး သဘောကျ နေမိတယ်၊းD အစ်မသက်ဝေ ပြောတဲ့ tips ကို triathlon အားကစားသမားတွေ အများဆုံး လုပ်ကြတာ တွေ့ဖူးတယ်ဗျ...၊
ဖိနပ်တွေ ထောင်ချီပိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အီမဲလ်ဒါမားကို့စ် ကို သတိရရင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို နှစ်သက် သွားခဲ့ပါကြောင်း...။း))
Aunty Tint August 20, 2013 at 7:41 PM
ဖိနပ်အကြောင်းသိကောင်းစရာလေးတွေ ဖတ်သွားတယ် သိချင်တာလေး မမေးနဲ့ဆိုလဲ မမေးတော့ပါဘူး မသက်ရေ :P
ဖိနပ်လေးခြေထောက်ရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်နေသလားလို့ :)
တန်ခူး August 20, 2013 at 8:51 PM
သက်ဝေရေ. ချစ်တယ်ဆိုရင်ခြေထောက်မကြည့်ကြေးနော်. ဟဲဟဲ. သူငယ်ချင်းတော်ပြီးသားဆိုတော့ ကိုကြိံးကို မပြစ်နိုင်သလို တို့ ကိုလဲမပြစ်လောက်ပါဖူး. ဟုတ်တယ်ဟုတ်. ရုပ်ဆိုးဆိုးခြေထောက်တွေက အားငယ်တတ်လို့ ပါ. သက်ဝေခြေထောက်လေးတွေက လူလေးနဲ့ လိုက်ဖက်စွာသန့် ပြန့့်ဖူးမို့ နေတာပဲ. ဆုတောင်းကောင်းလိုက်တာ
နွေလ August 21, 2013 at 8:52 AM
ဖိနပ်အကြောင်း အက်ဆေးလေး ရေးမယ် စိတ်ကူးမိကာမှ
ဒီလို ဖိနပ်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ အမှတ်တရပို့စ်လေး တွေ့လိုက်တာ
ရေငတ်တုန်း ရေသန့်ဘူး ရသလိုပဲဗျို့ အစ်မရေ
ကုိုယ်တုို့ ကျောင်းတက်တုန်းကလည်းခြေတွေလက်တွေသန့် ရင်အမှတ်အပြည့်ပေးကြတယ်။
Cameron August 21, 2013 at 12:24 PM
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တဂ်ပို့စ်လေး...ဖိနပ်ဆို ညီမလေးလဲ ခရေဇီသိပ်ဖြစ်တာ.. မမသက်ဝေဖိနပ်လေးတွေအကုန်ကြိုက်တယ် ခြေထောင်ဆိုဒ်ကြီးတာလဲတူတယ် မမသက်ဝေလဲ 39 40 စီးတာထင်တယ်...။ တဂ်ပို့စ်တွေမရေးကြတာကြာပြီနော် ရေးချင်တယ် ရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဦးမယ်...။
Khunmyahlaing August 21, 2013 at 2:38 PM
sensitive ဖြစ်တဲ့ အသားအရေမှာ အရေပြား ပါးတာကြောင့် ဖိနပ်ခဏခဏပေါက်တတ်တဲ့ ညီမ အတွက်အင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့tips လေးကြောင့် ကျေးဇူးကုဋေကုဋာပါဗျို့။ အမရဲ့ ခြေထောက်ကိုမြင်လိုက်ရမှ အင်မတန် အလိုလိုက်ခံရသော ချစ်ဇနီးဖြစ်မှန်း သိသွားတော့ တယ်။ ဘာလို့သိလဲ လာမမေးနဲ့.. ခြေချောင်းတွေ ကို ကြည့်ပြီး ပြောတာ :P
ရောင်ပြန် August 21, 2013 at 4:52 PM
Tips လေးတွေကို မှတ်သွားပါတယ်..
Adora etc. August 21, 2013 at 6:10 PM
ဖိနပ် Tag Post ဆိုလို့ရေးချင်သွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ရန် ဆိုပီး ရပ်ထားတာတွေ ဆက်ရေးပြီးမှပဲ။ အဟီး
ကြည်ဖြူပိုင် August 21, 2013 at 8:45 PM
မမရေ မမကိုတွေ့ရင် ခြေထောက်ကို ဘယ်လိုဖွက်ရပါ့လို့ အသည်းသန်စဉ်းစားလိုက်ရတယ် :P မမသက်ဝေ က လက်တင်မက ခြေထောက်လည်းလှတာပဲ။ ကုသိုလ်ကံကောင်းချက်။ ချစ်စရာလေး :)
အနော့်ကိုတွေ့ရင်တော့ ခြေထောက်ကိုကြည့်နဲ့နော်။ လိမ္မာတယ်။ ဟဲဟဲ :D. (အင်း …တကယ်တမ်း ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ ခြေထောက်သာမက …တကိုယ်လုံးလိုက်ရှာလည်း လှတဲ့နေရာ တနေရာမှ ရှိဘူးတော့။ အားငယ်ထှာ :( ) ဖိနပ်သစ်တခါစီးတိုင်း ဖိနပ်တခါပေါက်တော့ ခြေထောက်တခုလုံးအမာရွတ်လွတ်တယ်ကိုမရှိ။ မမမျှတဲ့ နည်းလေးစမ်းကြည့်မယ်။ ကျေးဇူးကမ္ဘာ :)
Hmoo August 24, 2013 at 9:15 AM
Hmoo August 24, 2013 at 9:16 AM